Accueil > Gazetin'ny nosy > Raholdina Betaintsofina : Nanompa reny mpiasan’ny finance
Raholdina Betaintsofina : Nanompa reny mpiasan’ny finance
Mba solombavambahoaka ihany i Naivo Raholdina na i Betaintsofina kanefa tsy misy dikany aminy mihintsy ny manompa reny olona. Tsy hoe rehefa olom-boafidy akory dia manan-jo hanompa sy hanao tsinontsinona olom-pirenena heveriny fa ambany noho izy.
Tamin’ny marain’ny zoma 15 oktobra lasa teo no nisehoan’ny tantara. Nanana fotoana tamina tompon’andraikitra ambony tao amin’ny ministeran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola teny Antani-
narenina ity depiote voafidy teny amin’ny firaisana faha-5 ity, tamin’io fotoana io. Rehefa tonga teo amin’ny parking-n’ny ministera i Betaintsofina izay nitondra fiara mazava ho azy, dia mbola nihidy ny bariera ka tsy afaka niditra nametraka ny fiarany tao izy. Teo akaiky teo anefa dia nisy mpiambina mpiasan’ny ministera nijorojoro izay miandraikitra ny parking natokana ho an’ny môtô. Noteren’i Naivo Raholdina hanokatra ilay bariera moa io mpiambina io, ity farany izay nilaza fa tsy andraikiny izany fa an’ny mpiambina hafa izay mbola tsy teo an-toerana.
Tsy nankasitraka izany anefa ingahy depiote miseho azy ho mafy be ka avy hatrany dia nivoaka ny fiara ary nanompa reny sy nanao teny ratsy variraraka tamin’ilay mpiambina môtô. Mazava ho azy fa tsy afaka nanao na inona na inona ilay mpiambina satria solombavambahoaka avy amin’ny antoko eo amin’ny fitondrana no nanompa sy nanao tsinontsinona azy. Tsy mahagaga intsony moa izany fihetsika mamohehatra nataon’i Naivo Raholdina izany satria ny olona rehetra mahafantatra azy dia mahalala tsara fa tompony amin’ny fitenenana ratsy sy fanompana olona ity depiote IRD ity rehefa tezitra. Tsiahivina ihany fa raha misy ny olom-boafidy miseho ho mafy be eto Madagasikara dia tsy misy ady hevitra fa i Naivo Raholdina Betaintsofina no voalohany kanefa toy ny vazimba tsy ampy refy ny tenany.